Arday British ah oo xabsi daa’in loogu xukumay Imaaraatka Carabta – Radio Daljir
Arday British ah oo xabsi daa’in loogu xukumay Imaaraatka Carabta
Noofember 22, 2018 5:10 b 0
Arday British ah oo haysta shahaadada PHD ayaa lagu xukumay xabsi daa’in, kadib markii maxkamad ku taala Imaaraatka Carabta ay ku heshay falal basaasnimo ah.
Matthew Hedges, oo ah 31 jir wax ka bartay jaamacadda Durham ayaa lagu helay inuu waday cilmi baaris ku saabsan istiraatiijiyadda ammaanka wadanka Imaaraatka Carabta, iyadoona maxkamad horteeda uu ka qirtay dambiga basaasnimo ee lagu soo oogay.
Dacwad oogayaasha ayaa sheegay inuu kahor qortay dacwadaha ay maxkamadda Abu Dubai kusoo oogtay iyo inuu galay dambi basaasnimo maxkamadda oo ah inuu dowladda Britain uu u ahaa basaase.
Raysal wasaaraha UK Thresa May oo wax laga waydiiyay arrintaasi ayaa sheegtay inay raadinayso wada hadal ay kala yeelato dowladda Imaaraatka Carabta.
Waxaa ay sheegtay xoghayaha arrimaha dibadda Jeremy Hunt inuu wici doono wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraatka Carabta Abdullaahi Bin Zaayid.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay inuu ka argagaxay kana niyad jabay dal saaxiib la ah Britain , kuna kalsoon inuu tilaaabadan qaado.
Qoyska Matthew oo la xiray bishii May ayaa sheegay inaan lagu kalsoonaan karin dacwadda maxkamadda Abu Dubai ee dambiyada wiilkooda iyadoo aan wax qareen ah loo qaban maxbuuska.
Bosaaso oo lagu dilay xisaabiyaha shirkad ganacsi